Buy Massage Slipper (ကျန်မာရေးအနိုပ်ဖိနပ်) (20,000Ks) in ကမာရွတ် on ipivi.com
Massage Slipper (ကျန်မာရေးအနိုပ်ဖိနပ်)
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 302ရက်​
ဖုန်းပွတ်တာများလို. မျက်လုံငြောင်းနေပါသလား။ ကွန်ပျူတာ အကြည့်များပြီး မျက်လုံး ကိုက်နေပါသလား။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ. အကြောတွေက ခြေထောက်မှာ စုနေပါတယ်။ မိတ်ဆွေ ခြေဖမိုး ကိုနှိပ်လို. အကြောတွေ ပြေသွားသွားမယ်ဆိုတာ ယုံပါသလား။
ခြေထောက်နှိပ်ဖို. Massage Slipper ကို Rocket တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
ရန်ကုန်မြို့ တွင်းအိမ်အရောက်ပို့ခပေးစရာမလို (Delivery Free)
Order လုပ်လိုသူများဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကို Comment ခဲ့ပါ
*Loading လုပ်နေသည်။ ခဏစောင့်ပါ။*
Video Link – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
– တစ်ရက်ကို 15 မိနစ်မှ 20 မိနစ် လောက်အသုံးပြုရုံဖြစ်သွေးလည်ပတ်မှု
ကောင်းခြင်း ၊ စိတ်တင်းကြပ်မှုလျော့ပါး ခြင်း ၊ ကျောက်ကပ်နှင့်ကိုယ်တွင်း
နာကျင်မှုများလျော့ပါးခြင်း ၊ စားဝင်အိပ်ပျော်ခြင်း..
– ခေါင်းအုံ၊ ခေါင်းခဲဖြစ်သူများ ပုံမှန်သုံးပါက3လအတွင်တစ်ဖြည်းဖြည်း ၊
– ကျန်းမာရေးဖိနပ်သည် သွေးလည်ပတ်မူကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့်
– ခြေထောက်ကျင်ခြင်း ၊ ထုံ ခြင်း ၊ လေဖြတ်နေသောလူများ အားလုံးဝေဒနာသက်သာစေရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်..
– Foot Massage နိုပ်သကဲ့သို့တူညီသော အကျိုး ကိုရရှိပါသည်..
– အိမ်တွင်း အားလပ်ချိန်မှာ အပမ်းဖြေအနိုပ်ကိရိယာတစ်ခုကဲ့သို့
– ကျန်းမာရေး ဖိနပ်တွင်ကပ်ခွါ ပါသောကြောင့်ခြေဖမိုးကြီးသောသူ
သေးသောသူ အားလုံးပါ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်..
– ရုံးတွင်း ၊ ဆိုင်တွင်း ၊ Company များတွင် အလုပ်လုပ်နေသော စီးပွားရေး
လုပ်ငန်း ရှင်များ၊ အညောင်းအညာ သက်သာစေရန် နှင့် အလုပ်အား ပိုမိုအာရုံ စိုက်နိုင်သောအကျိုး ကျေးဇူးများရှိသောကြောင့် ဆောင်ထားသင့်ပါသည်..
ယခုအချိန် မမှာယူဖြစ်ရင်တောင် နောက်အချိန်ကိုယ်လိုရင် ဒီ Post လေးရှာ
မတွေ့မှာ ဆိုးလို့ မိမိ Wall မှာ Share ထားခြင်းဖြင့်အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိင်ပါတယ်ရှင့်.. မိမိတို့စက်အကြောင်းလေးကို ပြည့်စုံ စွာဖတ်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
Order လုပ်လိုသူများဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်ကို Comment ခဲ့ပါ..
အမည်: Massage Slipper (ကျန်မာရေးအနိုပ်ဖိနပ်)